Ihe Kpatara Onwe N’enweta Nrụrụ Aka data
Home ngwaahịa DataNumen Access Repair Ihe Ndị Na-emekarị Ka A Nweta Nrụrụ Aka
Ebumnuche Na-emekarị Ka Mee Nweta Microsoft Access ma ọ bụ mebiri emebi
Enwere ọtụtụ ihe ga - eme ka faịlụ MDB gị mebie ma ọ bụ mebie. Anyị na-ekewa ha ụzọ abụọ, yabụ, ihe ngwaike na nke sọftụwia.
Mgbe obula akụrụngwa gị dara n’ichekwa ma ọ bụ ịnyefe data nke ọdụ data Access gị, ọdụ data ahụ ga-emerụ. Enwere ụdị atọ:
Ndabere Ngwaọrụ Data Nchekwa. Iji maa atụ, ọ bụrụ na diski ike gị nwere ụfọdụ ngalaba na-adịghị mma yana echekwara faịlụ MDB gị na ngalaba ndị a. Mgbe ahụ ị nwere ike ịgụ naanị akụkụ nke faịlụ MDB. Ma ọ bụ data ị gụrụ ezighi ezi ma jupụta na njehie.
Ngwaọrụ IZIRingTA na-ezighi ezi. Ọmụmaatụ, na Access nchekwa data bi na ihe nkesa, na ị na-agbalị iji nweta ya site na a ahịa kọmputa, site na netwọk njikọ. Ọ bụrụ na kaadị interface, cables, routers, hubs na ngwaọrụ ọ bụla ọzọ nke mejupụtara njikọ ntanetị nwere nsogbu, mgbe ahụ ụzọ dịpụrụ adịpụ nke MDB nchekwa data nwere ike ime ka ọ mebie.
Odida ike. Ọ bụrụ na ike ọdịda emee mgbe ị na-abanye na ọdụ data MDB, nke ahụ nwere ike ịhapụ faịlụ MDB gị mebiri emebi.
Enwere ọtụtụ usoro iji gbochie ma ọ bụ belata nrụrụ nchekwa data Access n'ihi nsogbu ngwaike, dịka ọmụmaatụ, UPS nwere ike belata nsogbu nsogbu ike, yana iji ngwaọrụ ngwaike a tụkwasịrị obi nwekwara ike belata ohere nke nrụrụ data.
Nakwa ọtụtụ nrụrụ nchekwa data Access na-eme n'ihi nsogbu metụtara ngwanrọ.
Ezighi ezi Sistem Iweghachite. Nwere ike ịchọpụta na ọ bụ ihe a na-ekweghị ekwe na usoro mgbake faịlụ nwere ike ime ka nrụrụ nchekwa data nweta. Mana n'eziokwu, mgbe ụfọdụ mgbe faịlụ faịlụ gị mebiri, ị na-agba mbọ ịnweta ọrụ mgbake data ma ọ bụ ọkachamara iji weghachite faịlụ MDB na ya, faịlụ ndị enwetara nwere ike ịbụ ndị rụrụ arụ, n'ihi:
N'ihi ọdachi faịlụ faịlụ, ụfọdụ akụkụ nke mbụ MDB nchekwa data faịlụ bụ lost na-adịgide adịgide, ma ọ bụ na-edegharị ya site na data mkpofu, nke na-eme ka faịlụ MDB ikpeazụ azacha ezughị ezu ma ọ bụ nwee data ezighi ezi.
Ngwaọrụ mgbake ma ọ bụ ọkachamara enweghị ọrụ zuru oke na ya / ọ chịkọtara ụfọdụ data mkpofu ma chekwaa ha dị ka faịlụ nwere mgbatị .MDB. Dị ka faịlụ ndị a na - akpọ .MDB enweghị data ọ bụla bara uru nke ọdụ data Access, ha abaghị uru.
Ngwaọrụ mgbake ma ọ bụ ọkachamara ahụ achịkọtala data data ziri ezi maka faịlụ MDB, mana ijikọtaghị ha n'usoro ziri ezi, nke na-emekwa ka faịlụ MDB a zoputara gharazie.
Yabụ, mgbe ọdachi faili faịlụ mere, ị ga-achọta ezigbo data nnapụta data / ọkachamara iji weghachite MDB data faịlụ gị. Ngwá ọrụ / ọkachamara ọjọọ ga-eme ka ọnọdụ ka njọ karịa ka mma.
Nje Virus ma ọ bụ sọftụwia ọjọọ ọzọ. Ọtụtụ nje, dị ka Trojan.Win32.Cryzip.a, ga-ebunye ma mebie Access MDB faịlụ ma ọ bụ mee ka ha enweghị ike ịnweta ya. Ọ na-ukwuu tụrụ aro ka ịwụnye mma mgbochi nje software gị nchekwa data usoro.
Dee Ọrụ Ime. Na ọnọdụ nkịtị, ị ga-akwụsị ịnweta n'ụzọ dị mma site na ịchekwa mgbanwe gị niile na MDB nchekwa data wee pịa "Ọpụpụ" ma ọ bụ "Mechie" ihe menu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na emechiri Access na-adịghị ahụkebe mgbe ị na-emepe ma na-ede na nchekwa data MDB, mgbe ahụ, injin Jet nchekwa data nwere ike kaa nchekwa data ahụ anya dị ka onye a na-enyo enyo ma ọ bụ nke rụrụ arụ. Nke a nwere ike ime ma ọ bụrụ na ike ọdịda akpọtụrụ aha n’elu emee, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị kwụsị ịnweta site na ịpị “Ọgwụgwụ Task” na Windows Task Manager, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị gbanyụọ kọmputa ahụ na-enweghị ịkwụsị Access na Windows kwesịrị.
Mgbaàmà nke ọdụ data nnweta rụrụ arụ:
Maka amaokwu gị, anyị anakọtara ndepụta nke njehie mgbe ịnweta faịlụ MDB rụrụ arụ.
Idozi Ebe Nrụrụ Aka Nrụrụ Aka:
Nwere ike iji ngwaahịa anyị na-emeri DataNumen Access Repair na weghachite ọdụ data Access gị rụrụ arụ.
Mmebi Microsoft Access MDB rụrụ arụ